Olee otú Iji pint Godaddy Iji Pịa Funnels - Foneelu Of The Day
Ugbu a unu na-amụta otú pint GoDaddy pịa funnels na atọ mfe nzọụkwụ.
Tupu ị malite na usoro a ị na-eme ka n'aka gị domain si mgbọrọgwụ ọ ama enịm elu.
Mgbe ahụ ị ga-aga na nzọụkwụ 1: ịkwesịrị ịmepụta a CNAME ndekọ site na-abụ abụ na ha website mgbe ị na-eme gị mkpa iji bulie gị na ngalaba si DNS ntọala.
Jide n'aka na a CNAME na aha WWW ọ bụ dị, ozugbo ị na-eme dezie lekwasịrị na-ibugharị clickfunnel si website.
Mgbe ị na-eme na-aga nzọụkwụ 2: tinye a na-atụ na-achị site na scrolling ala na-atụ ntọala, ahọpụta https://, abanye na gị na ngalaba, idebe ya na "na-adịgide adịgide" na "na-atụ naanị".
Melite ozugbo na-azọpụta.
Ugbu a anyị na-aga 3rd na nke ikpeazụ nzọụkwụ: agbakwunye gị domain na Clickfunnels.
Nke a bụ ndị kacha otu ebe niile i nwere ime ya bụ pịa "iji dị na ngalaba" nhọrọ, input gị domain, pịa na "mere nzọụkwụ" nhọrọ, akpakọrịta gị na ngalaba na a foneelu na emere ebere gị SSL.